Huawei Mate 10 Pro, leaked ihe oyiyi mbụ | Gam akporosis
Huawei Mate 10 Pro, weghaara ihe oyiyi mbụ
O nwere ihe karịrị izu abụọ ka Huawei hapụrụ iji gosipụta ọkọlọtọ ọhụrụ ya. Anyị na-ekwu maka Huawei Nwunye 10, anụ ọhịa ọhụrụ Asia nke ga-akụ ahịa iji merie ndị dị arọ dị ka Samsung Galaxy Note 8 ma ọ bụ LG V30.
Ka ọ dị ugbu a, ekwentị Huawei ọhụụ dị ezigbo mma, nsogbu bụ na n'agbanyeghị oke asịrị anyị ahụbeghị ụdị ya. Ruo ugbu a. Ma ọ bụ na foto mbụ nke Huawei Mate 10 Pro ebe ha n’egosi udiri ha n’ebube ya nile.
1 Huawei Mate 10 Pro na-egosi akụkụ ya n'usoro nsụgharị sụgharịrị ya.
1.1 Huawei Mate 9, nke a bụ eze ọhụrụ nke ahịa phablet
Huawei Mate 10 Pro na-egosi akụkụ ya n'usoro nsụgharị sụgharịrị ya.
Ọ bụ Evan Blass, onye na-agba akwụkwọ a maara nke ọma na onye nta akụkọ, onye na-ahụ maka ibipụta ihe oyiyi mbụ nke Huawei Mate 10 Pro. Ọ bụrụ na anyị na-atụle isi iyi, anyị nwere ike iche na ihe oyiyi ndị a dị adị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi na isi isiokwu a, emeputa nzo na na obere bezzel akara àjà a ekwentị na o siri ike ọ bụla n'ihu okpokolo agba nke mere na ihuenyo enyene fọrọ nke nta niile n'ihu nke ekwentị.
Dị ka a tụrụ anya na azụ anyị na-ahụ sistemụ igwefoto abụọ nke Leica bịanyere aka na ya nke ga-enwe ụdị ọrụ yiri nke Huawei Mate 9.
Ekwentị nke dị ezigbo mma yana imezigharị ọhụụ nke na-esochi asọmpi nke ndị asọmpi ya. Frameless ngosi na-aghọwanye fashionable na ọ ga-atụ anya na Shenzen dabeere na emeputa ga-ejedebe ịkụ nzọ na ụdị imewe.
Ugbu a, anyị ga-ahụ ihe Huawei juru ya anya na ya na Mate 10 ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịnagide nnukwu ibu nke ịdị elu nke Samsung Galaxy Note 8, LG V30 ma ọ bụ gosipụtara iPhone X.
Kedu ihe ị chere maka Huawei Mate 10 Pro ọhụrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 10 Pro, weghaara ihe oyiyi mbụ
Onye OnePlus 6 ga-abata na mmalite nke 2018 na ihuenyo 6-inch na-enweghị okpokolo agba na Snapdragon 845
BLU Ngwaahịa na Spain